Augusta, GA • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mandrosoa rehefa avy eo miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra ho an'ny fikosoham-batana erotika na fanorana Nuru Augusta, fomba GA!
Augusta, Augusta – Richmond County amin'ny fomba ofisialy, dia tanàna amina tanàna tafatambatra amin'ny sisintany atsinanana afovoan'ny fanjakana Etazonia any Georgia. Ny tanàna dia miampita ny renirano Savannah avy any South Carolina, eo an-dohan'ny faritra azafady. Ny tanàna lehibe indrindra faharoa any Georgia aorian'i Atlanta, Augusta dia hita ao amin'ny faritra Fall Line ao amin'ny fanjakana. Mandrosoa rehefa avy eo miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra manosotra vatana erotika or Nuru massage Augusta, GA fomba!